Jonah 4 (Xhosa)
1 Kwaba kubi kuYona kakhulukakhulu, wavutha ngumsindo.
2 Wathandaza kuYehova, wathi, Camagu, YehovaYehova! Labe lingelilo na ilizwi lam eli, ndisesemhlabeni wakowethu? Ngenxa yoko ndaphanga ngokubalekela eTarshishe; ngokuba ndandisazi ukuba unguThixo obabalayo, onemfesane, ozeka kade umsindoumsindo, onenceba enkulu, ozohlwayayo ngenxa yobubi.
3 Ke ngoku, YehovaYehova, seluwuthabatha umphefumloumphefumlo wam kum, kuba ukufa kum kulungilekulungile kunokuba ndidle ubomiubomi.
4 Wathi uYehova, Uyalungisa na ukuthi oku, uvuthe ngumsindo?
5 Waphuma ke uYona kuwo umziumzi, wahlala ngasempumalanga kuwo umziumzi, wazenzela khona umnqubaumnquba; wahlala ngaphantsingaphantsi kwawo emthunzini, ukuze ade abone ukuba kuya kuthekani na kuwo umziumzi.
6 UYehova uThixouThixo wammisela umhlavuthwa; waphuma, wenyuka waba phezu koYona, ukuba ube ngumthunzi entlokweni yakhe, umhlangule ebubini bakhe. Wawuvuyela uYona umhlavuthwa lowo, wawuvuyela kakhulukakhulu.
7 UThixoUThixo wamisela intlava, ukuthi qhiphu kokusa ngengomso, yabetha umhlavuthwa lowo, woma.
8 Kwathi ekuphumeni kwelanga, uThixouThixo wamisela ulophu lwasempumalanga; ilangailanga labetha kuYona entloko, wawa isiduli; wawucelela ukufaukufa umphefumloumphefumlo wakhe, wathi, KulungileKulungile ukufaukufa kum, kunokuba ndidle ubomiubomi.
9 Wathi uThixouThixo kuYona, Uyalungisa na ukuthi oku, uvuthe ngumsindo ngenxa yomhlavuthwa? Wathi, Ndiyalungisa ukuthi ndivuthe ngumsindo kude kuse ekufeni.
10 Wathi uThixo, Wena unenceba ngomhlavuthwa, ongabulalekanga nguwo, ongawuhlumisanga, okhule ngobusuku, wadaka ngobusuku:
11 ndingabi nanceba na ke mna ngenxa yeNineve, loo mzi mkhulumkhulu, unabantu abangaphezu kwekhulu elinamanci mabini amawakaamawaka, abangakwaziyo ukunene kwabo kwikhohlo labo; kwanempahla enkulu eninzi?